Apple Ukubuyekeza TV: oyisizukulwane sesine yokusakaza ibhokisi is hhayi kubhakwa ngokugcwele - Izindaba Rule
Apple Ukubuyekeza TV: oyisizukulwane sesine yokusakaza ibhokisi is hhayi kubhakwa ngokugcwele
I-Apple TV hhayi kubhakwa ngokugcwele. Izingxenye ividiyo zinhle kakhulu, kodwa okuqukethwe ezikhona ayenele in the UK. Insiza umculo umpofu, uhlelo lokusebenza akude akusebenzi nezinye izingcezu kukhona nje ungakakulungeli.
Lesi sihloko osesikhundleni “Apple Ukubuyekeza TV: oyisizukulwane sesine yokusakaza ibhokisi is hhayi kubhakwa ngokugcwele” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesibili umhlaka 24 November 2015 07.00 UTC
The new Apple TV uthembisa ukuletha izinguquko isipiliyoni sakho ithelevishini-sokubuka zokusebenza, iTunes and Siri, kodwa uzizwa kakhulu sifana umkhiqizo-lokuqala isizukulwane isigamu-wabhaka, hhayi oyisizukulwane sesine.
Uhlelo olusha Apple TV kuyinto encane, glossy black box ukuthi uhlezi ngaphansi TV yakho. Akukona ngempela njengoba encane njengoba odlule Apple TV, njengoba kungcono zinde wesithathu, kodwa kungcono ngobukhulu efanayo neminye Ukusakaza-media ibhokisi etholakalayo.
Ukubeka it up kuba impela eqondile. Plaka ku le ntambo kagesi nehhuku it up-TV yakho usebenzisa ikhebuli HDMI. Esinye akasinikanga in the box, kungoni ikhebula ye-Ethernet.
Ngokudabukisayo, ngisho uma uyithenga kusukela Apple Store, Apple TV kungafiki pre-amisiwe ID yakho Apple. Amazon enza lokhu TV Fire and Apple kufanele aqhubeke ekhula.
Une ezimbili ongakhetha wamisa isofthiwe. Ungasebenzisa i-iPad noma i-iPhone isethaphu ekulandiseni Wi-Fi kanye iTunes, noma ngesandla faka imininingwane yakho nge akude.
isethaphu Remote-based kwaba eqondile, kodwa ufaka umbhalo kwaba oyisicefe. Ukusebenzisa i-iPad isethaphu ekhuluphalisiweyo okokuqala okusho kwadingeka ukuqala lonke futhi. Kodwa uma usebenza kungcono umane empompini esheshayo ithebhulethi noma smartphone esiqongweni ibhokisi bese ulandela imiyalelo kudivayisi. imizuzu emihlanu futhi uqedile.
Once isethaphu kwenziwa, wena wedwa. Ayikho tutorial esheshayo noma usizo futhi kukhona eziningi ezifihlekile ekusithekeni. Ngokwesibonelo, kabili ngokushaya inkinobho "ekhaya", empeleni nguye icon screen TV kuso, kukuthatha imenyu zokusebenza muva esetshenziswa ukuze ungakwazi ushintshashintsha phakathi running zokusebenza. Akuve amathuba okuthi kungenzeki kini ukuyizama; Ngakwenza ngenxa yengozi okokuqala.
I top ingxenye ezicezile touch pad uba inkinobho eyodwa enkulu lapho sicindezelwe. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Amagama: ombaxambili-core A8
Isitoreji: 32 noma 64GB
Umsindo: Dolby Digital 7.1
Ubukhulu: 98 x 98 x 35mm
I Siri Remote entsha. It has a touchpad phezulu ukuthi uba omunye inkinobho giant. Ezinye izindaba zika-remote has imenyu, ikhaya futhi Siri izinkinobho, control ivolumu kanye ikhefu / inkinobho play.
Wena ukukhokhisa it ngekhebula Lightning kodwa adaptha yamandla Ayibalwa. It ayikwazi ukhokhiswe kusukela Apple TV, kodwa akukho ukukhanya noma yini kwi akude ukusho uma ishaja.
It uxhuma Apple TV nge Bluetooth futhi ine Blaster IR yokulawula ivolumu TV yakho noma amp, okufanele ngokuzenzakalela nje ukusebenza, ngaphandle uma une ngesandla ehlelweni it njengoba ngangenza Sony yami amp.
Ukuswayipha, ngokuswayipha futhi ukuswayiphela more
Ukuhamba esibonakalayo, iswayipha, khetha uhlelo lokusebenza bese ucindezela touch pad phansi nomlilo it up, noma khetha okuqukethwe kusukela phezulu eshalofini. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ukuswayipha iphedi incane ephumelelayo kunokuba usebenzisa iphedi ohlangothini. okungu Quick ukupheqa ngocezwana nomfutho, ungakwazi badonsa kolunye uhlangothi noma omunye ukuba ukuthutha isinyathelo esisodwa kwesokunxele, kwesokudla, phezulu noma phansi bese ucindezela phansi ukuze ukhethe. Ngaqhubeka ngifisa nje cindezela bese ubamba inkinobho ebonakalayo ngokusebenzisa uhlu olude.
I interface uye inertia esakhelwe ngaphakathi. Move umunwe wakho phezu iphedi kanye iphosta movie uzungeze kancane sengathi isikhombisi is wanamathela kuwo phambi Zips isikhethi off to the movie elilandelayo kanye. Akuve zibukeke ezikhangayo kodwa ngakuthola akumenzanga usebenzisa yona into elula - eqinisweni, empeleni engasenamahloni okukhethile okusheshayo.
Bamba inkinobho Siri ukuqala uhlelo lokulawula ngezwi. Ungakwazi uqalise izinhlelo zokusebenza, buza imibuzo elula - ezifana: "Sinjani isimo sezulu?"- Futhi search for amabhayisikobho nezinhlelo ze-TV, kodwa engafuni ukucinga umculo noma yini enye.
I kancane ohlakaniphile kuhlukanisa search zibe izinhlobo ezahlukene. Ngokwesibonelo, lushaya inkinobho ethi "Archer" uveza zonke izinkathi Archer kusukela iTunes esitolo futhi Netflix in the UK (amasevisi amaningi e-US). Kulula futhi isebenza kahle.
ukusesha Ngini ezithuthukile ezifana " 'uPierce Brosnan amabhayisikobho" lilandelwa ngelithi "kuphela kwabahle" ikhombisa ezinzulwini isilawuli sezwi. Isebenza kuhle.
Ngesandla upheqa okuqukethwe a lot kancane futhi ayigculisi.
Apple plus sesithathu amaqembu
I top-eshalofini ubonisa okuqukethwe kusuka kuhlelo lokusebenza akhethiwe, kuleli cala iTunes amabhayisikobho, kodwa zokusebenza ezifana Netflix ongabonisa umlando wakho abukwe. Photograph: I-Apula
Okuqukethwe on the Apple TV ngobubanzi ihlukaniswe izinto olunikezwa Apple and third-party Izinto. In the ekamu Apple ukufinyelela esitolo iTunes movie nemidlalo ye-TV, Apple Umculo noma umtapo wakho ICLOUD Umculo, iCloud Izithombe App Store.
Kuyacaca kakhulu uma uqale ukusebenzisa amasevisi Apple ukuthi abaningi babo bangabantu kungasebenziswa okudala. Labo Apple uye wachitha isikhathi esiningi nokunaka izinto on - amabhayisikobho nezinhlelo ze-TV kusukela esitolo iTunes - zinhle kakhulu. Siri isebenza kahle, kungcono bahlakaniphe futhi uma ubhekene ixhunyiwe yesimiso semvelo Apple, kuhle.
Kodwa Apple TV umculo lokusebenza kusemqoka ngakho Kuyakhungathekisa ukusebenzisa. Kubonakala sengathi yinto evela 2006, Ukuphenya ngokusebenzisa izinhlu massive, ngokuswayipha ngokuphindaphindiwe kungekho indlela eya ngokushesha weqe noma search. Siri nje uthi cha ngiyabonga. I abe umtapo enkulu umculo ngaphakathi iTunes Match futhi kwangithatha, nezwi, mayelana imizuzu emihlanu ukupheqa kusukela AC / DC ukuze ZZ Top.
Uma unethalente kumculi kwesokudla, Ukukhetha albhamu emihle, kodwa ungakudli amathrekhi kuyinto kukhathaza. Khetha, umqulu, khetha aphinde. Akukho inkinobho eyodwa noma ukuphakamisa isandla ngobungane ukuze uthole wena kwithrekhi elandelayo. It nakakhulu ngoba ungakwazi ukudlala umculo ngemuva ngenkathi enza nezinye izinto. Ungakwazi misa isikhashana futhi dlala, kodwa uma ufuna ukushintsha ithrekhi ufanele bambe yonke indlela emuva zingene lokusebenza umculo.
Into eyodwa enkulu Apple TV uya ngokuba liyisihlalo kugxilile iOS developer umphakathi. Okunye amabhokisi, ezifana Amazon Fire TV, babe zokusebenza kodwa ayikho enye ine draw ukuthi Apple TV ingabe konjiniyela ukudala zokusebenza Bespoke ngoba.
Apps isukela YouTube Manje TV ku Netflix - okuyinto luhlanganisa ne Siri search - to bethenga zokusebenza, Izinhlelo zokusebenza sezulu, Izinhlelo zokusebenza ze-nisebenzela nezinhlelo zokusebenza ze-hotel ukubhuka. I BBC iPlayer ayitholakali okwamanje. Ayikho ITV Player, Zonke 4, -Google Play noma Amazon Prime Isiqophi.
I uhlu zokusebenza cishe kuphela ukwandisa, futhi ngenkathi ungase akuphelanga zifuna nge-TV yakho, kungcono nje kuwukusika elijikayo uma iOS App Store iyiphi inkomba.
I-Apple TV imayelana njengoba enamandla njengenhlangano iPad Air 2 futhi kanjalo isekela imidlalo nge ezingeni lelifana nele of quality sokuqhafaza. Apple ubabiza ngokuthi "ukhwaliti duduza"; abanye ezifana Galaxy on Fire, bheka kuhle. Abanye imidlalo bamane cutesy.
Ukulawula kubo besebenzisa akude kungaba nakho Wii-like, wahosha akude bezungeza like a umshiza isibonelo, noma ngokuswayipha futhi indaba ulicindezela. Ngathola neither wanelise ikakhulukazi, befuna abazinikezele, izinkinobho isabele for arcade games and eshiywa ukhathele motion imidlalo.
Ungaxhuma abalawuli third-party ibe console esikhashana, kodwa akuzona zonke umdlalo buyakusekela. Into abangaziwa ungakwazi ukuxhuma abalawuli emithathu eqhelile, kodwa hhayi esikude engaphezu kweyodwa, okwenza Wii Tennis analogue aphume umbuzo. Two-player imidlalo efana Crossy Road, okuvumela ukuba usebenzise i-iPad noma iPhone njengoba isilawuli yesibili, babebahle ngendlela emangalisayo enhle emcimbini.
Imidlalo ngokuvamile download ngokushesha, kodwa ngathola ezinye imidlalo imidwebo olunzulu kwakudingeka bahlale ukulanda okuthile. Ngaphambi kokuba uqale uhlelo lokusebenza, futhi uma uzama ukushintsha ezingeni. It ngokushesha got kuyakhathaza.
The Lightning Itheku phansi esikude isebenza nanoma iyiphi iPhone 5 noma ishaja newer, kodwa kukhona omunye in the box. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
kokuma zemininingwane kafushane
Ungaxhuma a iqoqo Bluetooth headphones ngqo Apple TV kulalela ezizimele.
The sihenqo - fly-phezu footage of imizi kanye namathafa emhlabeni wonke, kusukela London eHawaii - kukhona mesmerizing ngobuqotho.
"Yehlisa Loud Umsindo" kwenza ashukumisayo uhla kokucindezelwa, okuyinto amazinga umehluko ivolumu phakathi imisindo elikhulu futhi ethule futhi kwenza ekulalela sasebusuku kangcono omakhelwane bakho.
Itheku Ethernet ihamba out at 100mbps. Xhuma nge-Wi-Fi nezivinini isheshe.
Siri lenzelwe ukuba ukwazi indawo kanye izintandokazi zakho, kodwa waphikelela ngokuthi wangilahla sezulu lwami Fahrenheit hhayi Celsius kwalelo sonto kuqala zokulusebenzisa.
I akude akuyona enembile. Izivakashi akakwazanga ukuthola it out ngachaza ukuthi kwaba touch pad ukuthi kwakudingeka aqhubeke nomsebenzi wakhe hhayi ukulisebenzisa.
Inkinobho menu inkinobho emuva futhi usebenza njengoba enza ku Ucingo Android noma i-Windows. Inkinobho ekhaya nguye ne logo screen TV kuso.
Apple App Remote asisebenzi entsha Apple TV.
Umculo okuphumayo ku 5.1 umsindo ozungezayo, hhayi nje stereo, uma une uhlelo umsindo ozungezayo.
Isandla wayibhinca for the akude iyatholakala, okuyodingeka uma une izingane kanye motion imidlalo.
Ayikho ukwesekwa 4K, engesiyo inkinga manje, kodwa libe eminyakeni embalwa eyalandela.
Ungakwazi khuhla ngokusebenzisa ividiyo noma umculo umunwe wakho phezu esikude.
Ukusho "wathini 'ukuze Siri ngeke weqa emuva 10 imizuzwana futhi agqoke Imibhalo engezansi isiqophi.
I oyisizukulwane sesine Apple TV kubiza £ 129 nge 32GB wesitoreji futhi £ 169 for 64GB wesitoreji.
Ukuze uqhathanise, TV Amazon Fire ne 4K kubiza £ 80 Roku 3 kubiza £ 100 kanye ne-Google Chromecast £ 30.
I-Apple TV hhayi kubhakwa ngokugcwele. Izingxenye ividiyo zinhle kakhulu, kodwa okuqukethwe ezikhona ayenele in the UK. Insiza umculo umpofu, uhlelo lokusebenza akude akusebenzi nezinye izingcezu kukhona nje ungakakulungeli. Njengoba base walindela ingxenye engcono kakhulu iminyaka emithathu ukukhipha Apple TV entsha, kungani hhayi ukuqedela?
I esikude ufana marmite, Abantu kuyofakazela love it noma awuyithandi, futhi ngenkathi esibonakalayo ibukeka fancy, ukutholakala yayo ohluphekayo awusebenzi ukwethula lutho olusha ikakhulukazi.
I App Store bungaba umsindisi Apple TV. Kungakhathaliseki zonke izinkonzo yokusakaza izotholakala kusazobonakala. Kubonakala sengathi Amazon Prime Isiqophi singenakwenzeka, nakuba ungase ziphendukela ukusakaza abanye AirPlay kusuka ku-iPad Ngokwesibonelo.
I-Apple TV unakho ukwenza okuhle ngempela, futhi iningi izimpikiswano babengase wakhuzwa izivuseleli zama-software, kodwa manje kungcono umsebenzi oqhubekayo akuson lesosizathu kwafana izimbangi ishibhile.
Buhle: amandla App Store, ukufinyelela iTunes and Apple Umculo, ukwazi okuhle kakhulu ngezwi, isilawuli IR umthamo, motion udlala
Bawo: isigamu-wabhaka, umculo lokusebenza abampofu, Siri angeke ukusesha umculo kanye kuphela iTunes and Netflix, yezinsizakalo UK yokusakaza ulahlekile, akukho ikhebula HDMI, ishaja akude
Five the best abezindaba-yokusakaza amabhokisi ukuvula TV yakho oyisimungulu ibe munye smart
-Google Chromecast ukubuyekeza: indlela esheshayo futhi kulula ukwenza TV yakho smart
Ukubuyekeza Amazon Fire TV: simple, fast, 4K futhi best TV Ukusakaza
I-Apula, Apple TV, Apps, Isigaba, Gadgets, iOS, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, Technology, Ithelevishini
← I-Apula, -Google futhi Microsoft: zibe buthaka ukubethela lets guys ezimbi e ekubuyiseleni Beeline Ukubuyekeza idivayisi navigation: fun ukucindezeleka khulula wabahloli →